Izaziso zikaGoogle. Uhlala njani unolwazi ngezinto onomdla kuzo | Iindaba zeGajethi
AIileta ezivela kuGoogle okanye kuZilumkiso zikaGoogle, zombini ezi ntaba zinyuka kakhulu, yinkqubo onokuthi ngayo kukugcina unolwazi kuwo nawuphi na umxholo onomdla kuwo. Izilumkiso zikaGoogle zisekwinqanaba le-BETA, oko kukuthi, kusesexesha lokuvavanya kwaye inguqulelo yayo yokugqibela ayikakhululwa, kodwa ibisebenza ngokugqibeleleyo ixesha elide.
LUkusetyenziswa kwale nkqubo kukuba sinokwenza izilumkiso, ezinxulumene nelinye okanye amagama aphambili, ukuze xa ulwazi olutsha olunxulumene nazo naziphi na izilumkiso zethu zenziwe UGoogle uyakusazisa ngokuthumela i-imeyile kwidilesi esiyifunayo.
GIzaziso ze-oogle ziluncedo ngakumbi ukufumana ulwazi olukhawulezayo kuwo nawuphi na umxholo onomdla wethu ngaphandle kokungena kwi-Intanethi ukuyikhangela. Umzekelo, ukuba sithanda iqela lomculo njenge U2 Singenza isilumkiso kweli qela, ukuze ngalo lonke ixesha umntu epapasha ulwazi kwiwebhu malunga ne-U2, uGoogle uya kusazisa nge-imeyile.
BKulungile ukuba unomdla kwisihloko kwaye ufuna ukwazi Ungazenza njani izilumkiso zikagoogle funda oku kulandelayo:
1) Singena kwiphepha lewebhu lezilumkiso zikaGoogle, Izaziso zikaGoogle.
2) Kwifestile ebonakalayo kufuneka sijonge indawo ekunene kwesikrini sethu:
3) Kwibhokisi "Yenza isilumkiso sikaGoogle" kufuneka singenise olu lwazi lulandelayo:
Amagama okukhangela: Apha kufuneka ubeke amagama aphambili ofuna ukuhlala unolwazi ngawo. Kwimeko yethu siza kuqhubeka nomzekelo weqela lomculo kwaye sibhale i-U2.
Tipo: Kweli candelo, uGoogle uzama ukumisela isidanga sakho malunga nexesha lesilumkiso. Ukuba unomdla wokwaziswa kuphela ngeendaba zamva nje ezivela kwi-U2 khetha "Iindaba", ukuba ufuna ukwazi nantoni na malunga ne-U2 epapashwe kulo naliphi na iphepha lewebhu khetha u "Web", kwelinye icala ukuba unomdla kuphela kulwazi equlethwe kumaQela eGoogle khetha "AmaQela", kwaye okokugqibela, ukuba ufuna ukwazi yonke into ebonakalayo kwiwebhu malunga ne-U2 khetha u "Comprehensive" kwaye uGoogle uzokugcina unolwazi olupheleleyo ngomxholo omtsha opapashiweyo malunga neU2.
Rhoqo: Ngoku khetha ukuba ufuna uGoogle akwazise kangaphi. Unokukhetha phakathi "kube kanye ngemini", "kube kanye ngeveki" kwaye "xa kusenzeka". Ukuba ukhetha olu khetho lokugqibela kuya kufuneka ulumke kuba ukuba isilumkiso simalunga nesihloko ekuhlala kuthethwa ngaso kumaphepha amaninzi, uya kufumana ii-imeyile zezaziso ezininzi.
Idilesi yakho ye-imeyile: Okokugqibela, ngenisa idilesi ye-imeyile apho ufuna uGoogle akuthumele ulwazi.
Kulo mfanekiso ulandelayo uyayibona indlela ebukeka ngayo ibhokisi "Yenza isilumkiso kuGoogle", umzekelo we-U2. Ndikhethe ukuphindaphinda kwesaziso kube kanye ngeveki kwaye ndithathe isigqibo sokuba ukukhangela kuphelele ukuze ndixelelwe ngayo yonke into enxulumene neqela.
4) Nje ukuba ugcwalise onke amasimi angaphambili, cofa ku "Yenza isilumkiso" kwaye kuya kuvela esi saziso silandelayo:
YNje ukuba wenze isilumkiso, uGoogle uya kuthumela i-imeyile kwidilesi oyinikezile ukuqinisekisa ukuba unomdla wokufumana eso silumkiso. Cofa kwikhonkco elivela kwi-imeyile kwaye ukusukela ngoku UGoogle uya kukugcina unolwazi ngesihloko osikhethileyo. Unokwenza uninzi lwezilumkiso njengoko ufuna, kodwa gcina oku kulandelayo, ukuba ufuna isilumkiso kwiqela "Ukuphinda" kunye nomnye ku "U2", kufuneka wenze isilumkiso ku "Ukuphinda" kunye nesinye se "U2" , kuba ukuba wenza isilumkiso esinye sodidi "Umvukeli + U2" uyakufumana ulwazi kuphela xa la maqela mabini enxulumene ngandlela thile, kubonakala kungenakwenzeka.
POkokugqibela, ukuba awuyithandi ulwazi olufumanayo okanye awufuni ukuqhubeka nokufumana izilumkiso kuGoogle, kuya kufuneka ukhangele nakweyiphi na iimeyile zezilumkiso ozifumeneyo zekhonkco elibonakala ngezantsi "Ukucima esi sicelo sezilumkiso zeendaba, ndwendwela:". Cofa kwikhonkco kwaye awusayi kuphinda ufumane ezinye izilumkiso kwesi sihloko. Nasiphi na esinye isilumkiso osenzileyo siya kuhlala sisebenza.
BKulungile ke sele uyazi ukuba ungazenza njani izilumkiso zikaGoogleUkusukela ngoku ukuya phambili ndiza kuba ndenza iitutorials ezahlukeneyo "inyathelo ngenyathelo" ukufunda ukusebenzisa yonke into asinika yona uGoogle. Sele kukho amaphepha amaninzi athetha ngeenkqubo ezahlukeneyo zikaGoogle kunye nezinto eziluncedo kodwa ndiza kwenza ezam izifundo kunye nophawu lweVinagre Asesino, "inyathelo ngenyathelo" kunye nemifanekiso, ukuze ibentle kwaye kube lula kuwe ukuba uyifunde ukuphatha zonke iinkqubo zikaGoogle. Ndiza kubona kungekudala, imibuliso ye-vinegary.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » software » Izaziso zikaGoogle. Uhlala njani unolwazi ngezinto onomdla kuzo
Ndeva ngezilumkiso, kodwa andikaze ndiyifunde inkcazo enje ngeenkcukacha.
Ibhlog yakho intle kakhulu.
Uxolo, ndenze isilumkiso malunga noAndres del Pino kwaye ndingathanda ukuyisusa, kodwa andazi ukuba ndenze njani ... ungandinceda?
Ingelosi kaYesu adrian sitsho
Yonke inkcazo eceliweyo inikwe mna kwaye ibonakala intle, ngoku ndiyazi ukuba zeziphi izilumkiso zikagoogle, zilunge kangakanani izilumkiso zikagoogle
Phendula kuYesu ingelosi adrian
UKarolyna omnandi sitsho
Sele ndiyicacisile indlela yokwenza isilumkiso sam seemvumi endizithandayo zezona zibalaseleyo kuba unolwazi kwaye uneenkcukacha.
Phendula uDulce Karolyna
luis elbaum sitsho
Ndicinga ukuba ugoogle yinguqu yenkcubeko yenkulungwane yama-XNUMX .. kufanele ukuba kubizwe ngokuba lixesha likaGoogle
Phendula luis elbaum
Molo, ukuba ungawusombulula lo mbuzo undizisela phantsi kwisitrato sobukrakra!
Ndizilungiselela njani izilumkiso ukuze kuphela abo basuka kwilizwe lam bafike kum?
Molweni nonke! Ndiyisebenzisile le nkonzo ixesha elingaphezulu konyaka, kodwa iintsuku ezimbini ndiyekile ukufumana izilumkiso kuGoogle, andikhange ndirhoxise naluphi na ubhaliso endijoyine kulo.
Ukuba ungachaza okwenzekayo ... Ndiyabulela kuwe, ndizamile ukwenza esinye isilumkiso kodwa andifumani khonkco ukuze ndiyisebenzise.
Vake R sitsho
Ndifana noLaura !!!! Inyanga okanye eyadlulayo isilumkiso sam sanyamalala !!! Andisafumani kwaye ndingathanda ukwazi ukuba kutheni kwaye ndiyisebenzisa njani kwakhona ???
Phendula uVake R
NDINGABHALISA NJANI KU-EL VINEGRE KILLER? NGABA UMNTU ANGANDINCEDA?
Ndidinga umntu oza kundixelela ukuba ndingabhalisa njani kwibhloko yeviniga. Nceda undincede.